देशलाई तानाशाह राजाको खाँचो छ : राधाकृष्ण मैनाली « हाम्रो ईकोनोमी
देशलाई तानाशाह राजाको खाँचो छ : राधाकृष्ण मैनाली
अहिलेको पपुलर धार प्रचण्ड–माधव नेपालको हो । केपी शर्मा ओलीको अहिलेको कदम असंवैधानिक भनेर कांग्रेस सभापति शेर बहादुरले पनि भने । त्यसकारण ओलीको धार कमजोर भएको कुरा स्पष्ट छ ।
छिमेकी देशलाई नेपालका गाणतन्त्रकालका शासकसँग विश्वास छैन । व्यवस्थामा पनि विश्वास छैन । इण्डियाले यसलाई हितकर ठानेको छैन । हिजो जसरी राजालाई घिसारेर बाहिर लगिएको थियो, त्यसैगरी धकेलेर भित्र ल्याउने पो हुन् कि ! अहिले नेपालमा राजतन्त्र नेपालीलाई भन्दा छिमेकी देशलाई बढी चाहिएको छ ।
कुरा यो हो कि, राजा आएर पनि समस्याको समाधन हुन्छ कि हुँदैन ? राजा हिजोकै शैलीमा आए भने देश संकटमै जान्छ । अब आउने राजा भनेको आम जनताको सुधारक हुँदै भष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, सामाजिक विकृतिलाई नियन्त्रण गर्ने, पेशागत निष्ठालाई विकास गर्ने किसिमबाट आउँदा बेटर हुन्छ ।
यहाँ नेताहरू सुध्रिने अवस्था नै छैन । राजा आउँदा पनि ‘बेबी किङ’ आएर समस्या समाधान हुँदैन । सेरेमोनियल राजाको काम छैन । साँच्चिकै सुधारक तानाशाह राजाको खाचो छ देशलाई ।